ဂျေရုဆလင်၌ အမေရိကန် သံရုံးသစ် ဖွင့်လှစ်သဖြင့် ပါလက်စတိုင်းသားတို့ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်၊ အစ္စရေးစ? - Yangon Media Group
ဂျေရုဆလင်၌ အမေရိကန် သံရုံးသစ် ဖွင့်လှစ်သဖြင့် ပါလက်စတိုင်းသားတို့ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်၊ အစ္စရေးစ?
၁၅ နှစ် အရစ်ကျဖြင့် ရောင်းချမည့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ အခန်းပေါင်း ၅ဝဝဝ ကျော် ရှိသော်လည်း ချေး??